Ingszụ ahịa - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Nylon Draw yarn
Polyester Draw yarn ederede
Polyester kpuchie yarn
Nylon kpuchie yarn
Filament kpuchie yarn
Yudọ kpuchie yarn
Yiri kpuchie abụọ
Ikpuchi ekpuchi Yarn
Latex kpuchie Yarn
Spandex kpuchie Yarn
Lycra Spandex kpuchie yarn
Lycra Rubber kpuchie yarn
Hịa ahịa bụ sọks gbara ọkpụrụkpụ ma na-agbanwe agbanwe ruo na apata ụkwụ ogologo. Ha bụ otu ụdị sọks apata ụkwụ (sọks ogologo na sọks apata ụkwụ bụ sọks apata ụkwụ, mana ọbụghị sọks). E nwere agba abụọ kachasị mara maka sọks: ọcha na oji.
A pụrụ ịtụle sọks dị ka ụdị sọks egwuregwu. Uzo nke sọks yiri nke sọks egwuregwu, na-enye ikpo ọkụ na nchebe pụọ na oyi, na-akwalite mgbasa ọbara n'ụkwụ ya ma mee ka ọ dịrị ha mma maka ihe egwuregwu. Ọ bụrụ ụmụ nwanyị chọrọ iyi uwe mwụda mmiri na ụbịa ma ọ bụ n'oge mmalite oyi., sọks bụ ezigbo nhọrọ
Uru nke sọks
Ndị mmadụ guzoro ogologo oge nwere ụfọdụ akwara varicose na nsọtụ ha, mana ogo dị iche.Varicose veins nke ala nsọ bụ ọrịa dị mma ịgwọ, ndị siri ike chọrọ ịwa ahụ. Ya mere, bestzọ kachasị mma bụ igbochi ha ime na ebe mbụ. Mgbe ọrịa anaghị apụta ìhè, Ekwesịrị ịme ihe mgbochi. Na mgbakwunye, n’oge ụgbọ elu na-efe efe, Ọkpụkpụ ụkwụ ezughi oke, ya mere mgbasa ọbara ọbara adịghị mma, nke na-abawanye n'ihe ize ndụ nke egbochi mkpụkọ ọbara. Enwere ike belata ihe ize ndụ nke egbochi mkpụkọ ọbara site na iji sọks na-agbanwe ma na-emega ahụ nke ọma ka ọ na-efe efe., nwanyị na-eyi sọks iji laghachi ok na ọmarịcha ụkwụ abụọ, ime ka ije ụkwụ wee dị mma ma nwekwaa ọ .ụ
Yabụ, kedu ụdị akụrụngwa ejiri sọks?
Ihe akụrụngwa maka sọks bụ spandex, naịlọn kpuchie yarn, polyester kpuchie yarn, latex roba kpuchie yarn, owu owu, etc.
Spandex bụ eriri na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe ma gbasie ike. Enwere ike ịgbatị ya 5-7 oge dị ogologo karịa fibrils. Ngwa ahia akwa nwere spandex nwere ike ijikwa contour mbụ ahụ mgbe niile. Ngwakọta nke sọks ahụ kwesịrị inwe spandex iji mee ka sọks na-agbanwe ma na-agbazigharị, dị mfe iyi, ma mee ka sọks dịkwuo nso.
Nylon bụ ihe kachasị emegide na ike nke eriri sịntetik. Ibu ahụ dị oke ọkụ ma na-agbatị dị mma. Dinggbakwunye naịlọn na sọks nwere ike ijigide ike na ike.
Ezi akwa a na-adọkpụchasị na akwa ya bụ ogologo owu dị ọcha ma dịkwa mma n'anya hapụ igwepụsị mkpụmkpụ mkpụmkpụ karịa site na igwe na-akpọ comber. N'ihi mkpochapu akwara ure dị obere na adịghị ọcha ndị ọzọ, yantin si na combed cotton dị mma ma ngwaahịa a gwụchara nwere mmetụta dị nro ma nwee ahụ iru ala.